Displaying items by tag: yangon - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Displaying items by tag: yangon
Thursday, 23 May 2019 10:14
လက်ရှိကားဈေးကွက်၊ လက်တလောအခြေအနေများအတွက် MAMDA (YGN) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုး ကိုကျော်မင်းထွန်းနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ကျောင်းကားတွေကို ရန်ကုန်လိုင်စင်ပေးမယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်နေတာနဲ့ပက်သတ်ပြီး …..
Published in Local Industry
Friday, 17 May 2019 17:01
Jaguar Myanmar မှ ကားအမျိုးအစား ခြောက်မျိုးကို Pre-Monsoon Promotion အစီအစဉ်ဖြင့် ရောင်းချ
Jaguar Myanmar မှ Jaguar ၊ Land Rover ကားအမျိုးအစား ခြောက်မျိုးကို Pre-Monsoon Promotion အစီအစဉ်ဖြင့် ရောင်းချလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Wednesday, 15 May 2019 16:17
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တက္ကစီတင်သွင်းခွင့် ဆက်လက် ပိတ်သိမ်းထားမည်ဟုဆို
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရထောက်ခံချက်ဖြင့် တက္ကစီတင်သွင်းခွင့်များကိုလာမည့်နှစ်တွင် ခွင့်ပြုပေးသွားမည်မဟုတ်ဘဲ ဆက်လက်ပိတ်သိမ်း ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
Wednesday, 15 May 2019 13:23
ရန်ကုန်မြို့လယ် လူကူးမျဉ်းကျားနှင့် ခုံးတံတားမှ လမ်းမကူးသူများကို ဒဏ်ငွေ ၃ သောင်း ရိုက်မည်
ရန်ကုန်မြို့တွင် သတ်မှတ်ထားသော လူကူးမြင်းကြားများ၊ ခုံးကျော်တံတားများမှ ကူးခြင်းမပြုပဲ လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူများကို ယနေ့မှစတင်ပြီး ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြင့် အမြင့်ဆုံးဒဏ်ငွေ ၃ သောင်းအထိတပ်ကာ ဒဏ်ရိုက်အပြစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
Saturday, 11 May 2019 10:17
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ရရှိပါက ဒေသအလိုက်ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်များ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးတွင်စီးနှင့်ခွင့်ရှိမရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့် ရရှိရေးအ တွက် စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ကို မေ ၅ ရက်က တောင်ဒဂုံမြို့ နယ်၊ လှော်ကားလမ်း၊ ၅၆ နှင့် ၇၀ ရပ်ကွက်ကြားရှိ ကွင်းပြင်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Wednesday, 08 May 2019 13:21
ရန်ကုန်မြို့တွင်းအော်တိုမီးပွိုင့်စနစ်သစ် စမ်းသပ်တဲ့နေ့မှာ မီးပျက်လို့ ယာဉ်လမ်းကြောင်းပိုကြပ်
ရန်ကုန်မြို့ကမီးပွိုင့်တွေကို အော်တိုစနစ်နဲ့ စမ်းသပ်ပြီးလုပ်ဆောင်နေတာမှာ စမ်းသပ်ပထမရက်မှာတော့ လျှပ်စစ်မီးပျက်တောက်နေတာကြောင့် တစ်ချို့မီးပွိုင့်တွေမှာ ယာဉ်လမ်းကြောင်းတွေက အရင်ကထက် ပိုကြပ်ခဲ့ပါတယ်။
Friday, 26 April 2019 10:39
သင်္ကြန်မတိုင်မီက နံပါတ်ထွက်ပြီးသား ၁၃၀၀ စီစီကားများနှင့် ၆၆၀ စီစီ မီနီထရပ်များ အရောင်းအဝယ် ကောင်းခဲ့သော်လည်း သင်္ကြန်အပြီးတွင် ဘယ်မောင်းကားသစ်များနှင့်အတူ အင်ဂျင်ပါဝါအမြင့် ဂျပန်ညာမောင်းကားများလည်း အရောင်းအဝယ်အေးစက်နေပါသည်။
Tuesday, 23 April 2019 15:36
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဝင်းအတွင်း တစ်လမ်းမောင်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တက္ကစီများ ရပ်နားခွင့်မပြု ဟုဆို
မေလ ၁ ရက် မှစတင်၍ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရှိ ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်များကို တစ်လမ်းမောင်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တက္ကစီများ ဆေးရုံဝင်းအတွင်း ရပ်နားခွင့်မပြုတော့ကြောင်း ဆေးရုံအုပ်ထံမှ သိရသည်။
Monday, 22 April 2019 10:38
ဂျပန်မှ Tokyo Century က Yoma Fleet ၏ ရှယ်ယာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဝယ်ယူ
မော်တော်ယာဉ်ငှားရမ်းသည့်လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ဆောင်နေသည့် Yoma Fleet ၏ ရှယ်ယာအသစ် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးဆုံး ငှားရမ်းကုမ္ပဏီများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည့် Tokyo Century Corporation က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆ သန်းကျော်ဖြင့် ဝယ်ယူလိုက်သည်။
Wednesday, 10 April 2019 10:34
သင်္ကြန်မှာ Mingalar Bus နဲ့ အထားကျကျလည်ကြမယ်
ရေပက်ခံလည်းထွက်ချင် ၊ တနေကုန် မတ်တပ်ကြီးလည်း ရပ်မနေချင် အထာကျကျ ဘယ်လိုထွက်မလဲ??
(Vehicle Spare Parts)
Mingalar Taung Nyunt,Yangon Region
MK (Yar Zar Tun Lin Trading)
Bawgawadi Co., Ltd.
(Engines & Accessories)